बैंकवित्तबारे ‘नलेज’ चाहियो ? हेर्नुहोस् एकदर्जन टिप्सहरु – Banking Khabar
बैंकवित्तबारे ‘नलेज’ चाहियो ? हेर्नुहोस् एकदर्जन टिप्सहरु
सामान्यतया वित्तीय साक्षरता भन्नाले खर्चसम्बन्धी कारबारबारे शिक्षा भन्ने बुझ्न सकिन्छ । खर्च गर्दा पूर्वयोजना बनाएर बजेट तय गरी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरता भन्नु पैसाले कसरी, कति र के काम गर्छ भनी बुझ्न सक्ने हुनु हो । वित्तीय साक्षरताको अभावमा व्यक्तिले परिवार व्यवस्थापन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा कमजोर निर्णय गर्न सक्छ, जसले परिवारको वित्तीय सबलतामा प्रभाव पार्न सक्छ । परिवारको वित्तीय सबलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको कुनै–कुनै तरिकाले राष्ट्रलाई नै असर पर्दै जानु हो ।